November 26, 2020 Xuseen 2
Puntlandtimes (Muqdisho)-Magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya waxaa ka dhacay shir muhiim ah oo u dhexeeyey wasiirka qorshaynta xukuumadda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan iyo wafti ka socda Puntland gaar ahaan hay’adda Maaraynta masiibooyinka ee HADMA.
Mudadii uu socdey kulankaasi waxaa si aad ah diiradda loogu saaray saamaynta ka dhalay duufanta GAKTI ee ku dhufatay deegaamo kuyaal xeebaha Bari ee Puntland oo sababy khasaare xoogan oo dhimasho iyo barkac kami yahay.
Cabdi Casiis Cabdulaahi Axmed oo kamid ah waftiga Puntland ee la kulmay wasiir Jamaal Maxamed Xaan ayaa waxa uu sheegay in saameyn guud ay ku yeelatay dhul baxaad leh,sida Xaafuun, Isku shuban, Gurdiya, , Baargeele, Boosaaso iyo tuulooyin dhowr kale ah.
“ Mudane Wasiir Duufta GAKTI waxa ay sababatay geerida 12 ruxu oo 8 Yeman ah iyo Afar
Saamli ah, sidoo kale qiyaasaada dadka ay saameysay waa 200 qoys ah sida Xaafuun, Isku
shuban, Gurdiya iyo Baargeele, halka Boosaso ay saameyn ku yeelatay Afar boqal oo kun oo
Barakacyaal ah, xoolo fara badan oo isugu jira Geel, Ari aye galaafatay Duufunta, dhinaca kale
waxa ay jirtay Isgaarsiinta iyo koronta oo dhulka la gashay GAKTI,waxaan ku soo gaarsiinay
dhibaata halkaasi ka jirto mudane wasiir marka in gurmad deg deg ah lala gaaro dowlad iyo
hay’adaha Gudaha iyo Kuwa Caalamiga ah “ayuu yari Cabdu Casiis.
Dhanka kalena, wasiirka qorshaynta xukuumadda federalka ah ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan waxa uu walaac ka muujiyay xajimiga ay dhuftay duufanta GAKTI deegaamada Puntland, wuxuuna balan qaaday inay kala shaqayn doonaan sidii looga jawaabi lahaa saamaynta duufaantaasi.
Jamaal goorma ayuu rag noqdey? Soo kii Ismaqiiqe farmaajo iyo Khayre dhurwaa ka biqi jirey? Goorma ayuu runta bartey? Soo isagii dayaaradii UN Qardho u soo dirtey yiri nidaamka Ismaqiiqe farmaajo ayaa soo diray, in yar ka dibna uu Wasiir dhaban cad uu kashifey oo si cad u sheegey in UN ka dambeysey. Balan qaad kula ahaa!!? Horta qof xor ah noqo.
ma omar says:
Kan Isku magacaabay BWB maxaa necebay uraya ka daadanaya